[Ithiphu] Enza ngendlela oyifisayo i-GRUB2 ku-ArchLinux | Kusuka kuLinux
[Ithiphu] Enza ngendlela oyifisayo i-GRUB2 ku-ArchLinux
I-compa yangicela ukuthi ngichaze ukuthi ungayenza kanjani ngokwezifiso i-GRUB in I-Archlinux ngakho-ke ngizoyishiya lapha:
1.- Thola isihloko esisithandayo
Noma yenza okwakho uma unesikhathi esithe xaxa ngizothatha isibonelo sika-Archxion. I-Archxion iku-yogurt ongayifaka nayo
i-yaourt -S grub2-theme-archxion
noma uyilande kusuka eGit bese ukopisha umkhombandlela ku
# mv -Rv ~ / Archxion / boot / grub / themes
2.- Hlela / njll / okuzenzakalelayo / grub
# vim / etc / default / grub
[...] # GRUB_THEME = "indlela / eya / gfx / itimu" [...]
Umugqa uphawuliwe, asikhiphi umugqa bese sengeza indlela yesihloko
[...] GRUB_THEME = "/ boot / grub / themes / Archxion / theme.txt" [...]
futhi njengoba sihambahamba kulezi zingxenye singanciphisa isikhathi sokulinda se-GRUB
GRUB_TIMEOUT = 3
3.- Khiqiza i-grub.cfg entsha
# i-grub-mkconfig -o / boot / grub / grub.cfg
Siqala kabusha futhi silungile manje i-GRUB2 izoba netimu enhle:
Lo mbhalo ubhalwe ku isithangami sethu por wada4Ngikuletha lapha nje ngokuhlela okuncane embhalweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » [Ithiphu] Enza ngendlela oyifisayo i-GRUB2 ku-ArchLinux
Amazwana ayi-23, shiya okwakho
Kuhle, kubi kakhulu angisebenzisi i-Arch 😀
Futhi ukwenza ngokwezifiso i-grub ku-Debian kulandela iphethini efanayo? Noma kungenzeka kuphela ngohlobo lwe-ArchLinux?
Iqiniso ukuthi umphumela uyamangalisa. Isetshenziselwe i-Debian grub ezenzakalelayo kanye / noma i-LMDE XD
yebo kufanele kucishe kufane
Ngingahamba ngibe zikanokusho ukuqedela umhlobiso we-debian yami isihloko esifana nalesi osibonise kusuka ku-arch.
Delujo ,, kepha angishintshi i-syslinux yami nganoma yini
Isebenza kwikhompyutha yedeskithophu yami enehluzo ze-Intel, ngenkathi ikwi-laptop yami ingasebenzi nabashayeli be-nvidia. Inikeza igrafu iphutha elingatholakali.
Ngidinga ukuzama abashayeli be-noveau, kepha ngiyenqena ukukhipha futhi bese ngifaka i-ejjeje.
Bengifuna ukuphawula ngaloyo mininingwane.
Kufanele ulungise isixazululo abasincomayo ukuthi kube yi-GRUB_GFXMODE elandelayo = 1024 × 768 ngithemba ukuthi iyakusiza 😀
kungasetshenziswa ukulungiswa okuphezulu, kuya ngekhadi levidiyo kanye nokuqapha.
Iphutha lapho likhuphukela kwideskithophu, ku-boot, libukeka lilihle.
Sekuyisikhathi eside ngaguqula i-grub .. Iqiniso ukuthi libukeka lihle kakhulu 😀… Ngizamile nabashayeli beNvidia futhi akubanga khona zinkinga ..
Kuyihlazo ukuthi bancoma ukulungiswa kwe-4: 3 ngaleyo ngqikithi, kepha kungenjalo kubukeka kukuhle, ngiyabonga ngethiphu, ikakhulukazi ngoba bengingakaze ngizihluphe ngokufaka ingqikithi ye-grub! 🙂
Eshu! ihlolwe ku-linuxMint 16 yami, ngesinqumo esinconyiwe se-Archxion 1024x768 futhi lutho. Anginabo abashayeli abaphethe umona abafakiwe, impela ngidonsa nabomdabu be-linuxmint (noveau) kepha angazi noma kungenxa yalokhu. Ngiyazamukela iziphakamiso. Okokungena, umnikelo omuhle kakhulu.
sebenzisa inketho "ezenzakalelayo"
abangane abahle, ekugcineni ngithole isisombululo senkinga yami, futhi ngiphawula ngaso uma kungenzeka sisize othile.
-kunqubo yokuqalisa komshini wami cindezela inkinobho ethi «c» ukufaka #grub console>
-Uma usubhalile ku-console ubhala i- «vbeinfo» bese kuvela izinqumo ezamukelwe i-grub yethu
-mine kuleli cala bekungu: 1024x768x32 hhayi 1024x768
Manje konke okumele ukwenze ukumisa ifayela «/ etc / default / grub» kulayini
GRUB_GFXMODE = 1024x768x32
-Sigcina izinguquko nge:
Ngiyethemba kuyakusiza. ukubingelela kubo bonke.
Ithiphu enhle kakhulu, ngabe uyasazi esinye isihloko se-grub2?
UGregorio Espadas kusho
Kubukeka kukuhle; ukube bekungeyona indlela ukusetha kwakho okuthusa ngayo (kweGRUB2 kukonke), bengingakusebenzisa… Okwamanje ngingumsebenzisi weSyslinux ojabulayo.
Phendula uGregorio Espadas
Futhi unayo konke okufakiwe? OO
Changos, othile angangisiza, ngisebenzisa Mnajaro futhi bengicabanga ukuthi nami ngingenza okufanayo, kepha ngithola okulandelayo:
mv -r ~ / Archxion / boot / grub / themes
mv: inketho engavumelekile - 'r'
Zama 'mv –help' ukuthola eminye imininingwane.
Sengivele ngilubonile ngamehlo lolu sizo futhi angibonanga nketho "-r"
ipanxo phakathi kusho
zama ngosonhlamvukazi "mv -R", noma esikhundleni sokusika noma sokuhambisa, kopisha ifolda ye-Archxion endaweni ekhonjisiwe, kuyefana.
Phendula ku-pansxo, en
Ukulungisa kungusonhlamvukazi -R kunephutha lapho.
Phawula ukuthi ingqikithi oyifakayo ibizwa ngeDharma.
Kupholile kakhulu, ngiyabonga.
Uxolo ukucasulwa kukusha kuma-previos, uzoba nokufundisa okuthile ukuqala ngemodi ye-graphic heh, wenze ucwaningo nge-playmouth kepha angazi ukuthi ngingakusebenzisa kanjani. Ngiyabonga kusengaphambili.
UBarry noLinBerry ukuphatha iBlackBerry yethu
Buyisela izilungiselelo zakho zedeskithophu ze-KDE 4